टी-शर्ट → प्रमोशनल कपडा • प्रोफेशनल P&M कम्प्यूटर कढ़ाई
शर्टहरू सक्रिय गुणवत्ता, स्टाफ वा विद्यार्थीहरूको लागि लुगाफाटा राम्रोसँग काम गर्ने उच्च गुणवत्ताको कपडा हो। टी-शर्ट धेरै बर्ष देखि धेरै लोकप्रिय छ। तिनीहरूको सार्वभौमिकता र लचिलोपनले उनीहरूको लोकप्रियतामा ठूलो योगदान पुर्‍यायो।
टी-शर्ट दुबैको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ कामदार लुगा साथै प्रचारात्मक उत्पाद.
तिनीहरू उच्च बहुमुखी प्रतिभा द्वारा विशेषता हुन्छन्, जसले अनुप्रयोगहरूको दायरालाई उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गर्दछ। टि-शर्टको प्रस्तावको समृद्धिले तपाईंलाई बिभिन्न प्रकार, रंग, बान्की र सबै भन्दा माथि आकारहरू किन्न अनुमति दिन्छ।
क्लासिक टी-शर्टको बाहेक, हामीसँग चेतावनी दिइएका टी-शर्टहरू उत्सुकताका साथ रसद, शिपिंग र निर्माण कम्पनीहरूका प्रतिनिधिहरू द्वारा छानिएका छन्।
हामी विभिन्न किसिमका सामानहरू प्रदान गर्दछौं जसले गर्दा सबैले आफ्नो आवश्यकताहरू पूरा गर्ने उत्पादन फेला पार्न सक्दछन्। हामीसँग विभिन्न वर्गहरूका मोडलहरू छन् - मानक र प्रीमियम गुणस्तर।
उनीहरूको उच्च गुणवत्ताको लागि धन्यबाद, उनीहरूले धेरै माग भएका ग्राहकहरूलाई पनि सन्तुष्ट पार्नेछन्। अरूलाई जस्तै उत्पादनहरु - टी-शर्टहरू निजीकृत गर्न सकिन्छ कम्प्युटर कढ़ाई वा स्क्रिन प्रिन्टि।.
एकै साथ, यो याद राख्नुपर्दछ कि कढ़ाईको मामलामा, धेरै सानो क्षेत्रमा उच्च घनत्व भएको ग्राफिक्स सिफारिस गरिदैन। हाम्रो पक्षबाट धेरै वर्षको अनुभव र विशेष सेवालाई धन्यवाद, तपाईं सबैभन्दा जिम्मेवार भेरियन्टमा मद्दत पाउन सक्नुहुन्छ।
हामी प्रतिस्पर्धी मूल्य र द्रुत अर्डर पूर्ति पनि प्रदान गर्दछौं। हामी तपाईंलाई निःशुल्क उद्धरण प्राप्त गर्न आमन्त्रित गर्दछौं।
टी-शर्टको अधिकतम वजन
टी-शर्ट र कपडा, गुणस्तर र व्यावसायिकतासँग सम्बन्धित हुनको लागि, टिकाऊ र आरामदायक हुनुपर्दछ, विशेष गरी जब हामी उनीहरूमा कम्पनी वा क्लब लोगो राख्न चाहन्छौं।
हाम्रो स्टोर मा टी-शर्ट भारी वजन का बनेको छ, जो क्षति प्रतिरोधी बनाउँछ।
बारम्बार धोइए पनि कुनै जोखिम हुँदैन। कपडाले धेरै हप्तासम्म यसको मूल फर्म कायम राख्दछ, यस उत्पादको लगानीलाई लाभदायक बनाउँदछ।
हाम्रोमा टी-शर्टहरू उपलब्ध छन् पसल प्रयोगकर्तासँग अनुकूलन हुने र आवागमनको स्वतन्त्रताको लागि उच्च गुणवत्तायुक्त सामग्रीबाट बनेको छ। ACTIVE-DRY प्रविधिमा आधारित टी-शर्टहरूको संग्रह विशेष ध्यानको योग्य छ। उनीहरू अत्यन्त परीक्षामा पनि उत्तीर्ण हुन्छन्, जहाँ अत्यधिक पसिना हुने उच्च जोखिम छ।
सावधानीपूर्वक सामग्रीको अन्त्यका साथ विस्तृत विवरणको परिशुद्धताले यसलाई कपडा बनाउँदछ जुन धेरै अवस्थामा काम गर्दछ।
टी-शर्टहरू उत्सुकताका साथ कामदारहरूको लागि कपडाका रूपमा प्रयोग गरिन्छ, विशेष गरी सेटमा, उदाहरणका लागि चिसो forतुका लागि कपडाहरूको चीजहरू, जस्तै: ऊन, तर ग्राहकहरू वा ठेकेदारहरूको लागि कर्पोरेट ग्याजेटको रूपमा पनि व्यवहार गरिन्छ।
कढ़ाईको साथ तिनीहरूको प्रयोग बिभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरूमा वा प्रतिस्पर्धामा पुरस्कारको रूपमा पनि लागू हुन्छ। यो सबै ब्रान्डको अवधारणामा निर्भर गर्दछ। यो एक आर्थिक तरीका हो तपाईको र तपाईको प्रापकका लागि सान्त्वना सुनिश्चित गर्न, र साथसाथै तपाईको ब्रान्डलाई पनि चासो दिनुहोस्।
प्रस्तावित टी-शर्ट र टी-शर्टहरू विस्तारमा ध्यान दिएर गरीएको छ।
सामग्रीको सौन्दर्य समाप्तले यसलाई कपडा बनाउँदछ जुन धेरै विभिन्न उद्योगहरूमा काम गर्दछ। टी-शर्टहरू फिगरमा समायोजन गर्दछन्, तर तिनीहरू आन्दोलन प्रतिबन्धित गर्दैन वा असुविधाको कारण गर्दैन।
टी-शर्टहरू मध्ये त्यहाँ पुरुष, महिला, बालबालिका र विश्वव्यापी - युनिसेक्सका मोडेलहरू छन्। तपाईले सहि साइज मात्र छान्नु पर्छ। परावर्तक मोडेल उत्पादनहरूका विशेष समूह हुन्, धन्यवाद जुन कार्यस्थलमा सुरक्षाको स्तर बढाउन सम्भव छ।
हामी उत्पादनहरु को छनौट र निजीकरण मा तपाइँको निपटान मा छौं। हामीसँग उन्नत मेशिन पार्क छ जसले हामीलाई हाम्रा ग्राहकहरूको लागि कुशल कार्य र उच्च गुणवत्ता प्रदान गर्दछ।
मोडेलहरूको पूर्ण दायरा दुबै हाम्रो अनलाइन स्टोरमा खरीद गर्न सकिन्छ www.pm.com.pl वा Allegro मा हाम्रो पसलमा "उत्पादक- BHP"।
यदि तपाईं हाम्रो नमूना कढ़ाई आदेशहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया ट्याबको बारेमा भ्रमण गर्नुहोस् फर्मि.
बीभ्रो मुद्रित टी-शर्टहरूप्रिन्टको साथ डेकाथ्लन टी-शर्टहरूशीतल टी-शर्टहरूजहाँ मुद्रित टी-शर्टहरूकहाँ मुद्रित टी-शर्ट किन्नजहाँ तपाइँको आफ्नै प्रिन्टको साथ टी-शर्ट किन्नुहोस्जहाँ तपाईं मुद्रित टी-शर्ट किन्न सक्नुहुन्छजहाँ तपाईं आफ्नो प्रिन्टको साथ टी-शर्टहरू अर्डर गर्न सक्नुहुन्छजहाँ तपाईं प्रिन्टको साथ टी-शर्टहरू बनाउन सक्नुहुन्छजहाँ तपाइँको प्रिन्टको साथ टी-शर्टहरू अर्डर गर्न उत्तम हुन्छजहाँ प्रिन्टको साथ टी-शर्टहरू अर्डर गर्नेजहाँ तपाइँको प्रिन्टको साथ टी-शर्टहरू अर्डर गर्नेजहाँ मुद्रित टी-शर्टहरू बनाउनेमुद्रित टी-शर्ट उत्पादन गर्न कति खर्च हुन्छकति मुद्रित टी-शर्ट बनाउन लागत छसेतो मुद्रित टी-शर्ट कसरी धोउनेकसरी छापिएको टी-शर्ट धुनेकसरी मुद्रित टी-शर्टहरू इस्त्री गर्नेकसरी छापिएको टी-शर्ट बनाउनेकसरी प्रिन्टको साथ टी-शर्टहरू बनाउनेटी-शर्टहरू3d टी-शर्टहरूप्रिन्टको साथ टि-शर्टहरू चलाउँदैमहिलाको टी-शर्टमहिलाको टि-शर्ट प्रिन्टको साथमहिलाको टी शर्ट तपाईंको आफ्नै प्रिन्टको साथप्रिन्टको साथ बच्चाहरूको लागि टी-शर्टहरूप्रिन्टको साथ टि-शर्टहरू चलाउँदैप्रिन्टको साथ तानको शर्टको फलप्रिन्टको साथ मेडिकल टी-शर्टहरूपुरुषको टी-शर्टपुरुषको टि-शर्ट प्रिन्टको साथ3 डी प्रिन्टको साथ पुरुषको टी-शर्टहरूमोटरसाइकल टी-शर्टहरूजिम टी-शर्टकस्टम टी-शर्टहरूएनबीए शर्टमहिलाको रात गाउनफुटबल शर्टप्रिन्टको साथ फुटबल शर्टहरूफुटबल जर्सी तपाईंको आफ्नै प्रिन्टको साथपोलो शर्ट प्रिन्टको साथपोलिस टीम जर्सीप्रिन्टको साथ टी शर्टहरू काम गर्नुहोस्खेल शर्टप्रिन्टको साथ स्पोर्ट्स टी-शर्टहरूतपाईंको आफ्नै प्रिन्टको साथ स्पोर्ट्स टी-शर्टहरूथर्मोएक्टिभ शर्टहरूप्रिन्टको साथ थर्मोएक्टिभ टी-शर्टहरूप्रिन्टको साथ टी-शर्टहरूटी-शर्टहरू 3d प्रिन्ट गरियोटीभर्टो प्रिन्टको साथ शर्टहरूBiałystok को छाप संग टी-शर्टहरूमहिलाहरूको लागि प्रिन्टको साथ टी-शर्टहरूबच्चाहरूको लागि प्रिन्टको साथ टी-शर्टहरूGdańsk प्रिन्टको साथ टी-शर्टहरूटि-शर्टहरू प्रिन्टको साथ कहाँ किन्नेअर्डर गर्ने ठाउँमा प्रिन्टको साथ टी-शर्टहरूटि-शर्टहरू प्रिन्टको साथ कसरी बनाउनेटि-शर्टहरू प्रिन्टहरू सहित बुबा, छोराक्याटोविस प्रिन्टको साथ टी-शर्टहरूक्राको प्रिन्टको साथ टी-शर्टहरूडु boat्गा प्रिन्टको साथ टी-शर्टहरूलुबलिन प्रिन्टको साथ टी-शर्टहरूपुरुषहरूको लागि प्रिन्टको साथ टी-शर्टहरूकस्टम मुद्रित टी-शर्टहरूटि-शर्टहरू छाप olsztyn साथप्रिन्ट poznań को साथ टी-शर्टहरूटी शर्टहरू को प्रिन्टको साथ आम जनताब्रिस्टल प्रिन्टको साथ टी-शर्टहरूवारसा प्रिन्टको साथ टी-शर्टहरूतपाईंको आफ्नै छापको साथ टी-शर्टहरूछाप श्रोकाउको साथ टी-शर्टहरूशिलालेख सहित टी-शर्टहरूदेशभक्ति प्रिन्टको साथ टी-शर्टहरूतपाईंको आफ्नै प्रिन्टको साथ टी-शर्टहरूआफ्नै छाप आरोपको साथ टी-शर्टहरूतपाईंको आफ्नै प्रिन्ट क्राकोका साथ टी-शर्टहरूतपाईंको आफ्नै प्रिन्ट poznań को साथ टी-शर्टहरूतपाईको आफ्नै प्रिन्टको साथ टी-शर्टहरूतपाईंको आफ्नै छाप वारसाको साथ टी-शर्टहरूटी शर्टहरू तपाईंको आफ्नै छाप क्रोकआउका साथमेगा टी-शर्टहरूटी-शर्ट प्रिन्टहरूटी-शर्टका लागि फलामकोटी-शर्ट डिजाइनहास्यास्पद टी-शर्टहरूप्रिन्टको साथ हास्यास्पद टी-शर्टहरूप्रिन्टको साथ सस्तो टी-शर्टतपाईंको आफ्नै प्रिन्टको साथ सस्तो टी-शर्टहरू